Wararka - Carwadii 129 -aad ee Canton oo si guul ah loo xiray
Carwadii 129 -aad ee Canton Fair oo soo gabagabowday 24 -kii Abriil
Xu wuxuu yiri iyadoo uu hagayo Xi Jinping Fikirka Hanti -wadaagga oo leh Astaamaha Shiinaha ee Wakhtiga Cusub, waxaan hirgelinnay tilmaamaha warqadda hambalyada ee Madaxweyne Xi iyo sidoo kale siyaasadaha iyo hawl -gelinta ay sameeyeen Golaha Dhexe ee CPC iyo Golaha Gobolka ee xasilinta ganacsiga shisheeye. Iyada oo ay hoggaaminayso Wasaaradda Ganacsiga ee PRC iyo Dawladda Gobolka Guangdong, iyada oo taageero weyn laga helayo waaxyaha kala duwan ee dawladda dhexe, waaxyaha ganacsiga maxalliga ah iyo safaaradaha iyo qunsuliyadaha Shiinaha ee dibedda, iyo dadaallada wadajirka ah ee dhammaan shaqaalaha, Bandhigga Canton 129 -aad. u shaqaynayay si habsami leh oo natiijooyin togan la gaadhay.
Xu wuxuu caddeeyay in xilligan, Covid-19 uu wali ku sii fidayo adduunka oo dhan, halka adduunyadu ay ka soo horjeedo dabaylaha. Isla mar ahaantaana, silsiladaha warshadaha iyo sahayda caalamiga ah ayaa wajahaya is -hagaajin qotodheer leh oo aan la hubin. Mawduuca “Canton Fair, Global Share”, Bandhigii 129-aad ee Canton Fair ayaa si guul leh loogu qabtay khadka tooska ah mabda’a “furan, iskaashi iyo wada-guulaysi”. Carwadu ma aha oo kaliya wax-ku-biirinta ku habboon ee lagu ilaalinayo dardar-gelinta wanaagsan ee ganacsiga shisheeye, horumarinta horumarinta hal-abuurka ee ganacsiga shisheeye, iyo xaqiijinta silsiladaha warshadaha iyo sahayda caalamiga ah ee siman, laakiin waxay sidoo kale dardar xooggan gelisay ganacsiga caalamiga ah iyo soo kabashada dhaqaalaha.
Xu wuxuu soo bandhigay in madalkii dalwaddii Canton Fair uu si habsami leh u shaqeeyay. Tiirrada soo socda ayaa lagu qotomiyey madasha, oo ay ku jiraan Bandhig-bixiyayaasha iyo Alaabada, Isku-darka Ganacsiga Caalamiga ah, Hoolka Bandhigga VR, Soo-bandhigayaasha Live, Wararka iyo Dhacdooyinka, Adeegyada iyo Taageerada, Aagga Ganacsiga E-commerce. Waxaan isku-darnay shaqooyinka bandhigga internetka, suuq-geynta iyo dhiirrigelinta, is-waafajinta ganacsiga iyo gorgortanka tooska ah si aan u dhisno goob ganacsi oo hal-joog ah oo jebisa xadka waqtiga iyo booska ee shirkadaha ka socda dalka iyo dibaddaba si ay ganacsi ugu sameeyaan farahooda. Laga bilaabo Abriil 24 -keeda, websaydhka rasmiga ah ee Canton Fair ayaa la booqday 35.38 milyan jeer. Iibsanayaal ka kala yimid 227 dal iyo gobol ayaa isdiiwaangaliyay oo ka soo qeyb galay Carwada. Isku-darka kala-duwan iyo kuwa caalamiga ah ee ka-qaybgalayaasha iibsadaha ayaa mar kale ka muuqday koritaanka xasilloon ee tirada iyo waddamada isha ugu sarreeya. Iyada oo la ilaalinayo habka heerka-3 amniga internetka, mareegaha rasmiga ahi wuxuu u shaqaynayay si habsami leh mana dhicin dhacdooyin waaweyn oo xagga amniga internetka ah. Iyada oo leh adeegyo wanaagsan, adeegyo, iyo waayo -aragnimo isticmaale oo la wanaajiyay, madal -gacmeedka Canton Fair ayaa gaadhay yoolka “diiwaangelin, soo hel alaab, iyo wada -xaajoodyo” iibsadayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha, waxaana aad u ammaanay soo -bandhigayaasha iyo iibsadayaashuba.
Badeecadaha cusub iyo teknolojiyaddu waxay keeneen firfircoonaanta Bandhigga Canton Virtual. 26,000 oo soo-bandhigayaal ayaa si taxaddar leh u diyaariyey una soo bandhigay alaabooyin cusub oo lagu sameeyay tikniyoolajiyad la beddelay qaabab hal-abuur leh, oo u muujinaya shirkadaha Shiinaha ee adduunka 'muhiimadda hal-abuurnimada iyo sawir cusub oo ka mid ah shirkadaha Shiinaha iyo summadaha Shiinaha iyo sidoo kale "Lagu Sameeyay Shiinaha" iyo "Lagu Abuuray Badeecadaha Shiinaha ”. Bandhigii 129 -aad ee Canton Fair, bandhig -bixiyeyaashu waxay soo raaciyeen wax ka badan 2.76 milyan oo badeeco, koror ah 290,000 kalfadhigii ugu dambeeyay. Sida ku cad xogta ay buuxiyeen shirkaduhu, waxaa jiray 840,000 oo badeecooyin cusub ah, koror ah 110,000; 110,000 alaab caqli badan, 10,000 ka badan fadhigii u dambeeyay. Caqli badan, wax-ku-ool ah, alaab tiknoolajiyad sare leh oo leh qiimo aad u sarreeya, suuq-geyn is-lahaansho iyo IP-ga iska leh iyo sumadaha ayaa goob joog u ahaa koritaan joogto ah, oo leh horumarsan, caqli badan, summadaysan, iyo alaabooyin shaqsiyeed oo ah kuwa guud. 340 shirkado dibadeed oo ka kala yimid 28 dal iyo gobollo ayaa soo geliyay in ka badan 9000 oo badeecadood. Uruurinta badeecooyin heer sare ah ayaa soo jiitay iibsadayaasha caalamiga ah si ay u sameeyaan gorgortan. Hoolka bandhigga dalwaddu wuxuu soo jiitay uruurinta 6.87 milyan oo booqashooyin, oo ay tahay tii Pavilion National 6.82 milyan oo booqasho, iyo Pavilion International 50,000 booqashooyin.
Falsafadaha iyo moodooyinka cusub ayaa soo dhoweeyey iibsadayaasha iyo soo bandhigayaasha. Iyada oo ah fadhigii saddexaad ee dalwaddii, Bandhigii 129 -aad ee Canton Fair ayaa awood u siiyay soo -bandhigayaasha leh aaladda Internet Plus. Waad ku mahadsan tahay labadii kalfadhi ee hore, soo-bandhigayaashu waxay lahaayeen faham qoto dheer oo ku saabsan suuqgeynta dhijitaalka ah iyo qulqulka tooska ah. Kalfadhigii 129 -aad, waxay awoodeen inay soo bandhigaan badeecooyin qaabab kala duwan leh waxayna bixiyeen adeeg macmiil oo kala duwan. Durdurrada tooska ah ayaa la daawaday 880,000 jeer. Iyada oo la hagaajiyay ilaha qulqulka tooska ah, soo-bandhigayaasha ayaa si wanaagsan loogu diyaariyey waxyaabo badan oo la beegsado oo toos ah. Iyada oo loo sii daayo toosinta iyo is-dhexgalka iibsadayaasha, soo-bandhigayaashu waxay heleen faham sax ah oo ku saabsan dalabaadka suuqa, sidaa darteed horumarinta R&D iyo suuqgeynta qaab aad loo beegsaday. Celcelis ahaan, socod kasta oo toos ah ayaa la daawaday 28.6% in ka badan fadhigii u dambeeyay. Hoolka Bandhigga VR, oo ay ku yaalliin waababkii VR ee soo -bandhigayaasha, ayaa la aasaasay iyadoo lagu saleynayo qeybaha wax soo saarka si loo siiyo waayo -aragnimo quus ah iibsadayaasha. 2,244 soo -bandhigayaasha ayaa naqshadeeyay oo soo dhejiyay 2,662 waab VR, kuwaas oo la booqday in ka badan 100,000 jeer.
Suuqyada cusub iyo dalabyada cusub waxay bixiyeen rajo wanaagsan. Bandhig -bixiyayaashu waxay si buuxda uga faa'iideysteen suuqyada iyo kheyraadka gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyagoo maraya Bandhigga Canton, iyagoo qanciyay dalabyo cusub oo labada suuq ah waxayna gacan ka geysteen wareegyada laba -geesoodka ah. Natiijooyin miro -dhal ah oo ka dhashay suuqyada dhaqanka ayaa la gaaray iyadoo xiriir dhow lala yeeshay suuqyada soo baxaya. Shirkadaha Shiinaha ayaa ku hawlanaa sahaminta suuqa gudaha. Intii lagu guda jiray Carwadii 129 -aad ee Canton Fair, waxaan kor u qaadnay martiqaadka iibsadayaasha gudaha. 12,000 oo iibsadayaasha gudaha ah ayaa isdiiwaangaliyay, kaqaybgalay Carwada waxayna bilaabeen 2400 jeer oo fariin deg deg ah, iyagoo soo gudbiyay ku dhawaad ​​2000 oo codsiyo raadin ah. Waxaan qaadnay tillaabooyin kala duwan oo aan ku xireyno ganacsiga gudaha iyo ganacsiga shisheeye, kor u qaadista iibka gudaha ee badeecadaha markii hore loo soo saaray dhoofinta, waxaanna siinnay bandhig-bixiyeyaasha sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha baaxadda leh ee ay keeneen dalabka gudaha ee sii kordhaya iyo adeegsiga la hagaajiyay. Iyada oo ay weheliyaan Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Guangdong iyo rugaha ganacsiga ee khuseeya, “Wadista Ganacsiga Gudaha iyo Dibadda ee dhacdada labada wareeg” ayaa si guul leh loo qabtay. Ku dhawaad ​​200 oo soo -bandhigayaal iyo in ka badan 1,000 iibsadayaasha gudaha ayaa ka qayb -galay ciyaarta goobta. Bandhig -bixiyayaashu waxay bixiyeen jawaab -celin togan inay ahayd dhacdo wax -soo -saar leh.
Isku -dheelitirnaanta ganacsiga waxaa loo qabtay si xariifnimo badan oo sax ah. Waxaan hagaajinay astaamaha ka baaraandegista codsiga soo-saaridda ee koontada soo-bandhigaha iyo farriinta deg-degga ah, hagaajinta qaybinta kheyraadka tooska ah iyo maaraynta Xarunta Bandhigga si loo fududeeyo isu-dheelitirka ganacsi ee saxda ah. Hawl wax ku ool ah oo ku habboon, kaarka e-ganacsiga ayaa u adeegay sidii kanaal muhiim u ah soo-bandhigayaasha si ay u ururiyaan macluumaadka iibsadayaasha. Ku dhawaad ​​80,000 oo kaarar ganacsi ayaa lagu soo diray mareegaha Canton Fair. Calaamadda “ganacsiga gudaha” ayaa lagu daray in ka badan hal milyan oo badeecado, iibsadayaashu waxay ku dooran karaan badeecadan hal guji. Waxaan sidoo kale soo saarnay buug hage onlayn ah oo soo bandhigayaal tayo leh oo ku saabsan ganacsiga gudaha si ay uga caawiso alaab -qeybiyeyaasha iyo iibsadayaasha inay si dhaqso ah isugu xirmaan. Aagga “Raadinta Miyiga”, sumad gaar ah ayaa lagu daray 1160 shirkadood oo ka kooban 22 gobol iyo magaalooyin si loogu beegsado ciyaarta.
Waxqabadyo dhiirrigelin ganacsi oo kala duwan ayaa diiradda lagu saaray saamaynta la taaban karo. Waxaan qabannay dhacdooyin taageeraya oo tayo leh oo taxane ah si aan u ciyaarno doorka Bandhigga Canton ee madal dhammaystiran oo leh hawlo badan. 44 Waxqabadyada “Dhiirrigelinta Daruuraha” ayaa lagu qabtay 32 dal iyo gobollo adduunka ah, halkaas oo laga gaadhay daboolidda caalamiga ah iyo “Belt & Road” iyo waddamada RCEP waxay diiradda saareen. Xafladaha saxiixa heshiiska onlaynka ah ayaa lala yeeshay 10 wakaaladood oo warshadeed iyo ganacsi sida Rugta Ganacsiga Shiinaha ee Brazil (CCCB) iyo Rugta Ganacsiga Caalamiga ah ee Kazakhstan, taasoo sii ballaarineysa shabakadda Canton Fair. Waxaan u qabanay dhacdooyin isboorti oo loogu talagalay tafaariiqlaha ugu weyn Ruushka X5 Group, tafaariiqda ugu weyn ee Indonesia Kawan Lama Group, iyo tafaariiqda shanaad ee ugu weyn Ameerika Kroger iyo alaab -qeybiyeyaasha Shiinaha, dallacsiinta abaabulan ee rucubyada warshadaha sida toy Shantou, qalabka guryaha ee Guangdong yar yar, dharka Zhejiang iyo warshadaha cuntada Shandong, oo bixinaya kanaal gorgortan oo hufan oo internetka ah in ka badan 800 oo soo -bandhigayaal summad leh iyo saldhigyo warshadeed oo muhiim ah oo ay ku taliyeen wufuudda ganacsiga iyo iibsadayaasha muhiimka ah si ay u kaxeeyaan ciyaar -beegsiga la beegsanayo ee u dhexeeya warshadaha gudaha ee muhiimka ah iyo suuqyada caalamiga ah. 137 sii -deynta alaabada cusub ayaa waxaa qabtay 85 shirkadood oo hormuud u ah 40 qaybood oo bandhigyo ah oo ka socda ergooyin ganacsi oo 20 ah, oo daboolaya alaabta korontada iyo elektiroonigga ah, badeecadaha maalinlaha ah ee macaamiisha iyo dharka iyo dharka. Waxaan bilawnay 2020 CF Awards Show Show Badeecad Cusub si aan u muujino badeecadaha Shiinaha ee tayada leh ee leh hal -abuurnimada ugu badan iyo qiimaha ganacsiga adduunka. Canton Fair PDC waxay soo jiidatay ku dhawaad ​​90 wakaaladood oo naqshadeysan oo ka kala yimid 12 dal iyo gobol oo ay ku jiraan Faransiiska, Kuuriyada Koonfureed, Nederland, waxayna siisay goob loogu talagalay soo bandhigida saacad iyo isgaarsiin si ay uga caawiso shirkadaha hagaajinta tayada, dhisidda sumcadaha iyo sahaminta suuqyada hal-abuurnimo on design.
Adeegyada taageeraya ayaa la dhammaystiray. Qaab isku-dhafan oo onlayn-toos ah si wax looga qabto cabashooyinka IPR iyo murannada ganacsiga ayaa la xoojiyay si loo hubiyo ilaalinta IPR heer sare. 167 soo -bandhigayaal ayaa lagu xareeyay cabashooyinka IPR, 1 shirkad ayaa la go'aamiyay inay tahay ku -xadgudub la sheegay. 7 hay'adaha maaliyadeed ee Qaybta Adeegyada Maaliyadeed ayaa u habeeyay badeecado gaar ah oo loogu talagalay soo -bandhigayaasha. Qeybta waxaa la booqday ku dhawaad ​​49,000 jeer, iyada oo in ka badan 3,300 oo deyn la bixiyay iyo ku dhawaad ​​78,000 oo xaaladood oo dejin ah ayaa guud ahaan la maareeyay. Waxaan sidoo kale qabanqaabinay munaasabad maalgelin toos ah Bangiga Shiinaha Laanta Guangdong si loo gaaro isgaarsiin fool-ka-fool ah oo lala yeesho shirkadaha soo bandhigaya oo aan bixinnay adeegyo maaliyadeed oo la beegsaday. Adeegyada kastamka ee onlaynka ah ayaa la xoojiyay si ay u hagaan shirkadaha si ay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​siyaasadaha qaraabada ah. Adeegyada ganacsiga shisheeye waxaa loo bixiyay hab isku dhafan, sida adeegga boostada, gaadiidka, kormeerka badeecadaha, shahaadaynta tayada badeecadda, si loo dhiso madal adeeg “one-stop” ah. Waxaan samaynay Aagga Ganacsiga E-commerce ee Xudduudda ah waxaanna qabannay hawlo cinwaan looga dhigay “Same Tune, View Shared” si loogu xiro aaladaha ganacsiga e-commerce loona kordhiyo dheefaha shirkado badan. Goobaha Tijaabinta Ganacsiga E-Commerce-ka ee Shiinaha oo dhan 105-Xudduudda Ka Gudba Xuduuda ayaa loo soo bandhigay adduunka. Waxaan kaamilnay warbaahinteena badan, luuqadaha badan iyo 24/7 nidaamka adeegga macmiilka ee caqliga leh kaas oo muujiyey “taageero shaqaale iyo adeeg caqli leh” si aan u siino adeegyo ku habboon iibsadayaasha iyo soo-bandhigayaasha labadaba.
Xu wuxuu soo bandhigay in qiimaha Canton Fair uu ku jiro kaalintiisa ku aaddan iskaashiga ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo adduunka intiisa kale qaab hal-abuur leh, gorgortan ganacsi oo hal mar ah iyo wax soosaarka shirkadaha Shiinaha iyo shisheeyaha, ilaha la isku halleyn karo ee alaab-qeybiyaha iyo iibsadaha, aragtida warshadaha isbeddellada iyo ganacsiga caalamiga ah iyo adeegyo dhammaystiran. Bandhigga Canton wuxuu kor u qaaday horumarinta warshadaha bandhigyada Shiinaha iyo kuwa caalamiga ah, wuxuuna hormariyay ganacsiga dibadda Shiinaha, ganacsiga adduunka iyo kobaca dhaqaalaha adduunka. Mustaqbalka, annaga oo jooga Bandhigga Canton waxaan sii adeegi doonnaa istaraatiijiyadda qaran ee Shiinaha, furitaanka dhan walba ah, horumarinta hal-abuurka ee ganacsiga shisheeye, iyo sameynta qaab horumarineed oo cusub. Marka loo eego dalabaadka shirkadaha Shiinaha iyo kuwa ajnabiga ah, waxaan sii wadi doonnaa wanaajinta adeegyadayada si aan u siino faa'iidooyin badan ganacsiyada gudaha iyo dibaddaba.
Xu wuxuu sheegay in warbaahinnada adduunka oo dhan ay warbixinno si wanaagsan loo qorsheeyey oo dhinacyo badan leh ka soo bandhigeen Carwadii 129-aad ee Canton Fair, iyagoo ka sheekaynaya sheekada iyo fidinta codka Carwadda, sidaas darteedna abuuraysa jawi aragti dadweyne oo wanaagsan. Wuxuu sugayey inuu la kulmo qof walba kalfadhiga 130aad.